चौरजहारी घटनाका विषयमा संसदमा चर्काचर्की – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
चौरजहारी घटनाका विषयमा संसदमा चर्काचर्की
१३ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे गर्मागर्मी बहस भयो । सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई हप्ताभित्र निश्पक्ष प्रतिवेदन आउने आश्वासन दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारबाट हुने छानबिनप्रति आशंका व्यक्त गर्दै यो घटनाको छानबिन संसदले आफैं गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले, सरकारले आफ्नो काम गरोस् । छानविन होला’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा अहिले पनि घृणाको अपराध छ, यो सहन सक्दैनौं भन्ने सन्देश संघीय संसदले दिन आवश्यक
छ । सभामुखको पनि जिम्मा हो, संसदले सन्देश यो दिन आवश्यक छ ।’
संसदमा बोल्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा जुनसुकै सोत, साधन वा पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् । यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । यो कलंकलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिवद्धता चाहन्छु ।
कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने, ‘वास्तवमा रुकुम पश्चिममा जुन घटना घटेको छ । यसमा संसदले जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, त्यति लिएको देख्दिनँ । कि दलितको मुद्दा दलितले उठाउनुपर्ने ? बाँकी ठूलो नेताहरुले उठाउनुनपर्ने ?
जातिको विरोधमा बाहुनवादले यो घटना घटाएको छ । त्यसकारण गृहमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ( १८ जना व्यक्तिलाई मार्नलाई जाने १२ जना मात्रै थिए कि अरु पनि थिए ?
सम्बन्धित जिल्लाको सीडीओ साव, सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयरसाव भनिरहनुभएको छ, – यो जातीय विभेदको घटना हो कि होइन, अनुसन्धान गर्दैछौं । कसैले जातीय भनेर अतिरञ्जित र्गयो भने असैहृय हुन्छ । भन्न खोजेको के हो ? या कुनै पनि हालतमा तोडमोड गर्न नमिल्ने विषय हो । यो घटना विशुद्ध रुपमा जातीय रुपमा भएको घटना हो । यसलाई त्यहवी मर्मका साथ अगाडि लानुपर्छ ।
मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछुतलाई दण्डनीय र्पायो । त्यसको ५४ वर्षपछि पारित अपराध संहिताले कडा दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
जाजरकोटाको घटनाले स्तब्ध बनाएको छ । जातकै कारणले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अझ प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्माको अभिव्यक्तिले हामीलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । उहाँले गम्भीर घटनाको बचाउ गर्न खोज्नुभएको छ । उहाँलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुर्पयो ।
गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रियसभामा पनि यस्तै जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘हामी कानुनी राज्यकै पक्षमा छौं । कानुनको उलंघन गर्ने जोसुकै होस् । कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।